soatoavina malagasy – Blaogin'i Voniary
Étiquette : soatoavina malagasy
Koa atolotra àry ity boky ity, sao lahy mba hahitantsika vahaolana amin’izao andro manjombona diavin’ny firenentsika izao. Boky izay namelombelona ny fanantenan’ny maro noho izy nitondra rivo-baovao feno hanitry ny maha-Malagasy ka tonga dia nambabo ny fon’ny tantsaha tsy ankanavaka na avy aiza na avy aiza. Ho hitanao ao anatin’ireo « kabary ala-olana » miisa 62 notsongaina... Lire la Suite →
Ny Soatoavina Malagasy : tsy hevitra manidina, tsy zava-tsy hay takarina ! Ny Soatoavina Malagasy : tsy hoe ianarana any an-tsekoly fotsiny, tsy hoe tononina fotsiny rehefa manatanteraka fomba Malagasy toy ny famangiana manjo, fanateram-bodiondry, famadihana sy ny sisa. Fa ny Soatoavina Malagasy : natao iainana andavanandro sy ampiharina eo amin’ny izay sehatra ikatrohanao. Ny kolonely Ratsimandrava, izay mpandala fatratra... Lire la Suite →